Amasayithi e-E-commerce aphethe imakethe eku-inthanethi | Izindaba ze-ECommerce
Amasayithi e-E-commerce aphethe imakethe eku-inthanethi
Ngalokhu kusengaphambili emhlabeni kwe-intanethi, sekusungulwe izindawo ezahlukahlukene ezilawula imakethe eku-inthanethi, lawa masayithi athengisa izinto ezingaphezu kwezingu-10,000 XNUMX ngosuku, azenze inkampani enkulu emakethe ye-inthanethi yomhlaba, eshaya izimakethe zendabuko anezinga lokuthengisa ngazo ephansi kakhulu kunalezi. Okulandelayo, sizokutshela ukuthi i- amasayithi adume kakhulu ekuthengeni online.
3 IBlue Nile
Mhlawumbe isiza esaziwa kakhulu ngokuthenga nokuthengisa, le nkampani yasungulwa ngo-1995 futhi yaba nempumelelo enkulu kangangoba kusukela ngo-2002 kuya ku-2015 baba ngabanikazi benkampani enkulu kunazo zonke yezinhlelo zokukhokha online ezisuka e-United States, i-Paypal. I-Ebay ayinikeli kuphela indawo lapho ungathenga futhi uthengise izimpahla nemikhiqizo, futhi ikunikeza nethuba lokukwazi ukuthengisa imikhiqizo yakho, lapho abanye abasebenzisi banikela ngamanani ahlukile emali, nalapho umsebenzisi onikezwa okuphezulu kakhulu ezothatha khona umkhiqizo esikhathini esithile.
Isayithi elinenani elikhulu kunazo zonke lokuthengisa emhlabeni, linokuthengisa okuningi okusondele kuma-dollar ayizigidi ezingama-50,000 6, leli sayithi linendawo yokuqala ezindaweni ze-E-commerce emhlabeni. I-Amazon yasungulwa ngoJulayi 1994, 150,000 edolobheni laseSeattle, eWashington, e-United States. Ngabasebenzi abacishe babe yi-XNUMX, ngokungangabazeki iyinkampani ebaluleke kakhulu yokuthenga nokuthengisa emhlabeni.
Isungulwe ngonyaka we-1999, iyisayithi enkulu kunazo zonke eku-inthanethi ngokuya ngamadayimane nobucwebe, le sayithi eku-inthanethi incintisana nezitolo zobucwebe bendabuko ezifana neTiffany & Co, futhi iphikisana nezitolo eziku-inthanethi ezifana neBelgium Diamonds neRingsberry .com. Inomthombo wemali engu- $ 473 million futhi inabasebenzi abangama-300.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-ECommerce » Marketing » Ukuthengisa oku-intanethi » Amasayithi e-E-commerce aphethe imakethe eku-inthanethi
Amathiphu wokugcina ukuphepha kwakho kusayithi ye-E-commerce
Yiziphi izinto engingazithengisa online?